भर्खरै ६० लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको ९.९६ प्रतिशतले बढ्यो शेयरमूल्य - नेपालबहस
भर्खरै ६० लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको ९.९६ प्रतिशतले बढ्यो शेयरमूल्य
| १३:१६:३६ मा प्रकाशित
४ माघ, काठमाडौं । भर्खरै मात्र ६० लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको ९.९६ प्रतिशतले बढ्यो शेयरमूल्य वृद्धि भएको छ ।
आज आइतवार प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको शेयरमूल्य ९ दशमलव ९६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । आज कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू २९८ पुगेको छ ।
मार्केट डेप्थमा विक्री चाप शून्य छ भने ९ लाख ५१ हजार ८६९ कित्ता खरीद माग रहेको छ । १ बजेसम्म कम्पनीको ७० कित्ता शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
कम्पनीको शेयर कारोबार तल्लो मूल्यबाट शेयर कारोबार खुला भएको थियो । नेप्सेले कम्पनीको पहिलो कारोबारको लागि रू १०९ दशमलव ५६ देखि ३२८.६८ ओपन रेञ्ज तोकेको छ । पहिलो कारोबारको लागि नेप्सेले कम्पनीको नेटवर्थको तीन गुणा बढीसम्म मूल्य तोक्ने गर्दछ ।
कम्पनीले मंसिर २९ गतेदेखि पुस २ गतेसम्म ६० लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको थियो । कम्पनीको आईपीओमा १० लाख ४९ हजार ४७ जना योग्य आवेदकबाट २ करोड ७८ लाख २१ हजार १६० कित्ता शेयरको लागि रू २ अर्ब ७८ करोड बराबरको आवेदन परेको थियो । ५ लाख ४० हजार आवेदकले १० कित्ता शेयर पाएका थिए ।
शुक्रबारदेखि ५९ लाख कित्ता आईपीओमा सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्ने २ दिन पहिले
शेयरबजारमा तीन अर्बको आईपीओ आउँदै, सबैलाई शेयर पर्ने निश्चित ६ दिन पहिले
महिला लघुवित्तको आईपीओ आज बाँडफाँड गरिदै, यी तीन ठाँउबाट नतिजा हेर्न सकिने ? ६ दिन पहिले
अब सञ्चारमाध्यमबाट आईपीओको नतिजा हेर्न नपाइने, यस्ताे छ कारण ? ६ दिन पहिले
ब्राजिलमा पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना बाट एक हजारको मृत्यु ९ घण्टा पहिले
गाउँमा सडक पुगेपछि बाजागाजासहित खुशीयाली २ दिन पहिले
क्षमताभन्दा तेब्बर कैदीबन्दी हुँदा व्यवस्थापनमा चुनौती ४ दिन पहिले
नवनियुक्त राजदूत रेग्मी र चेम्वर पदाधिकारीहरु बीच आर्थिक अभिवृद्धि बारे छलफल ७ दिन पहिले
नेपालकै नमूना प्राणी उद्यान निर्माण शुरु २ हप्ता पहिले
सागमा सहभागी बक्सिङ खेलाडीको कोरोना बीमा ६ महिना पहिले
नेपाल ट्रष्टमा मेरो नाम जोडेर राजनीतिक पूर्वाग्रह साधिएको छ : सभापति देउवा १२ महिना पहिले
हिन्दूत्वको मुद्दा – कांग्रेसको सञ्जीवनी २ वर्ष पहिले
कांग्रेस नेता पौडेलद्वारा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग ८ महिना पहिले